Nzukọ Mgbakọ Mianmaa na India na-egosi mmekorita njem nleta
Home » Na-agbasa News Travel » Nzukọ Mgbakọ Mianmaa na India na-egosi mmekorita njem nleta
Enwere njikọ na-eto eto n’etiti India na Myanmar na njem.
Onye nleta na-ahụ maka ndị isi na India Mr Nandan Singh Bhaisora ​​gosipụtara njikọta na-eto eto, azụmahịa na njikọ azụmahịa n'etiti agbata obi abụọ ahụ na Mgbakọ Mgbakọ na Azụmaahịa Myanmar na India nwere na Halllọ Nzukọ Obodo na Sagaing, Myanmar na 11 Jenụwarị.
Consulate General nke India, Mandalay na mmekorita ya na Sagaing District Chamber of Commerce and Industry, Indo Myanmar Association, Imphal na Manipur Industries Development Council, Manipur na-ejide "Mgbakọ Mgbakọ nke India na India na ahia ahia ahia" site na 11-12 Jenụwarị.
Ndị nnọchi anya mmadụ 30 nke ndị isi azụmaahịa a ma ama sitere na Manipur, ndị na-emekọ ihe dị iche iche esonyela na mmemme ahụ. Ndị nnọchi anya azụmaahịa a sitere na ngalaba dị iche iche dịka ọrụ ugbo, mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri, nhazi nri, ọrụ aka, aka ọrụ, igwe na ngwaahịa ngwaahịa, ọrụ ego, ahụike, agụmakwụkwọ na njem.
N’okwu ya na mmemme ahụ, Consul General nke India toro nnukwu njikọ nke India na Myanmar.
Ihe ndị a bụ ederede edeturu nke okwu Consul General nke India Mr Nandan Singh Bhaisora.
Nnọọ nnabata anyi niile n’aha ndị nnọchi anya ndị India, Mandalay, na nzukọ a na-azụ ahịa azụmaahịa Myanmar na India, nke ndị Consulate India, Sagaing District Chamber of Commerce and Industry, na-ahazi na njikọta ọnụ, Indo-Myanmar Association. , Imphal, Manipur na Diplomacy Economic na States Division nke Ministry of External Affairs nke Gọọmentị India.
Enwere ndị nkwado ndị ọzọ na ndị mmekọ n'akụkụ abụọ ahụ. Taa, ndị nnọchi anya azụmaahịa na-ahụ maka ngalaba dị iche iche - ngwaahịa mkpụrụ osisi - mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri, nhazi nri, aka aka, aka ọrụ, igwe na ngwaahịa ígwè, ihe ndị na-eme njem, ọrụ ego, ahụike, njem nleta wdg sitere Manipur, India.
Mpaghara North East nke India nwere ọtụtụ ngwaahịa dịgasị iche iche; Manipur nwere ụlọ ọrụ achara, handlooms, aromatic na ọgwụ ọgwụ, ịkọ mkpụrụ osisi, ọrụ aka, mmepụta silk, ọtụtụ akụ ndị sitere n'okike, ikike nke ụlọ ọrụ ọgbọ hydropower, ebe ndị njem, ezigbo ụlọ ọgwụ; azụmahịa na Myanmar na ụfọdụ n'ime ngwaahịa ndị a na-aga n'ihu mana ọ bụghị n'ọtụtụ ọ kwesịrị ime. Naanị na 13th June na ọzọ na 19 Disemba, 2018 anyị haziri ụdị mmemme ịkparịta ụka n'inntanet na MRCCI Hall, Mandalay site na nkwado nke Manipur Chamber of Commerce and Industry na MRCCI. Enwekwara m nzukọ na October 2018 na mpaghara Sagaing Industrial na SDCCI na achọpụtara m na e nwere ọtụtụ ebe ndị isi azụmaahịa sitere na Sagaing Region nwere ike iso ndị si Manipur soro m wee rịọ ha ka ha buru ndị nnọchi anya azụmahịa na Imphal n'oge Ememe Sangai. Obi dị m ụtọ ịhụ na ndị nnọchianya ahụ gara ma enwere mmemme azụmahịa ebe ndị isi ndị isi na-asọpụrụ nke mpaghara Sagaing na Manipur bụ ndị isi ọbịa; n'ezie ndị isi azụmahịa si n'akụkụ abụọ ahụ emeela ụfọdụ kọntaktị bara uru n'oge nzukọ ahụ.
Ebumnuche nke nzukọ nzukọ azụmahịa taa bụ iji nọgide na-enwe njikọ n'etiti ndị ọchụnta ego na-azụ ahịa nke mba abụọ na usoro a kachasị mma; nke a gha akwalite mmata, nyere aka n'inwe ịkparịta ụka n'networkntanet karị ma kwalite mmekọrịta akụ na ụba na azụmahịa n'etiti mba anyị abụọ. Enwere ikike na ohere maka njikọta ọnụ na ịgafe ahịa azụmaahịa na itinye ego na ngalaba ndị a yana ụfọdụ ngalaba ndị ọzọ dịka - ọrụ agro, mmanụ na gas, ike, njem, ezigbo ala, nkwukọrịta, IT, mmepụta anụ ụlọ, ngwaahịa azụ. , njem nlegharị anya ahụike, teknụzụ textile, ihe owuwu, nrụpụta, akụrụngwa, ụlọ ọrụ ụgbọ ala, ciment, mmanụ dizel, ọla na ọla, wdg.
N'ihi ọdịnala dị nso, akụkọ mgbe ochie, mmekọrịta ọdịnala, ọdịnala na ahụmịhe ndị mmadụ na-ahụkarị, ihe kpatara ASEAN, mgbanwe ndị mmadụ na-eme na-eme n'etiti Myanmar na Northeast India. Nleta nke Mịnịsta ala anyị Shri Narendra Modi n'afọ gara aga emeela ka mmekọrịta anyị na mba ọzọ gaa nnukwu ugwu. Naanị na Jenụwarị, n'ụbọchị Republic anyị n'afọ gara aga, Onye Ndụmọdụ Ọchịchị na New York na New Delhi maka ASEMAN-India Summit Summit; Madam Aung San Suu Kyi kwuru na mmekọrịta Myanmar-India na mmekọrịta ASEAN India nwere ọdịnala nwere njikọ chiri anya kemgbe oge ochie, ịbụ ụdị mmekọrịta dị n'etiti mpaghara na myirịta ọdịnala. Maka India, Myanmar bụ Eastern Gateway nke ga-ejikọ India na mpaghara ASEAN; N'otu oge ahụ, maka ASEAN, Myanmar bụ Western Gateway nke ga-ejikọ mpaghara ASEAN na India. N'aka ozo, Myanmar bu akwa mmiri di n'etiti India na ASEAN.
Ọzọkwa naanị ọnwa ole na ole laghachi na Eprel, Minista na-ahụ maka Mpụga anyị bịanyere aka na MOU asaa mgbe ọ gara NPT na otu n'ime MOU ndị kachasị mkpa bụ Agreement na Land Border Crossing, - akara ngosi na mmekọrịta anyị na mba abụọ, na-agbakwunye oke ala mba dị n'etiti emepere obodo n’abali asatọ nke onwa asato n’afọ gara aga nke n’eme ka ndi si mba abuo gafee ikike ngafe na visa; nke a enyela nkwado dị ukwuu na mmekọrịta anyị dịka azụmahịa, njem, mgbanwe ọdịnala na ndị mmadụ kpọtụrụ metụtara. Enwere ọtụtụ ọrụ na-arụ n'akụkụ abụọ nke ókèala. N'ezie Manipur na Sagaing Region nwere ikike ịzụlite n'ime ụzọ akụ na ụba n'etiti mba anyị abụọ ebe ha abụọ jikọtara onwe ha site na oke ala dị n'etiti mba abụọ.
Nleta a gara nke ọma nke Onye isi ala nke ugwu nke India emeela ka ọdịnala nke mmekọrịta dị n'etiti ndị isi anyị sie ike nke gụnyere ọ bụghị naanị mmekọrịta abụọ kamakwa akụkụ nke azụmahịa, itinye ego, ọdịbendị, ndị mmadụ na ndị mmadụ. N'oge nleta a, gọọmentị nke Mianmaa kwupụtara visa na mbata nke ndị India, n'ezie nke a ga-eme ka azụmahịa ndị njem dị ka PM anyị kwuworị ọkwa maka ebe a maka visa ụmụ amaala Myanmar n'afọ gara aga. Ọzọkwa, m ga-achọ ịkọwa ebe a na anyị na-agbaso okwu a na Ministrị anyị na Delhi maka ebe ịntanetị maka e-visa maka njem nke ndị obodo Mianmaa site na Nweta Ala: Tamu-Moreh na ngafe oke.
Abụọ abụọ ahụ kwurịtara banyere ọrụ njikọ dị iche iche nke anyị na-atụ anya iji mezue oge; Nke a ga - eme ka ọ bụghị naanị ịkwalite mmụba na azụmaahịa kamakwa mmekọrịta akụ na ụba mmekọrịta ọha na eze na mpaghara Sagaing. A na-arụkọ ọrụ ụgbọ ala a haziri ahazi n'etiti Mandalay & Imphal (n'ụzọ na Tamu & Moreh Border) maka mkpagharị na-aga nke ọma nke ndị mmadụ n'akụkụ abụọ. Busgbọ ala a kwa gafere mpaghara Sagaing. Ekwesiri ileba anya na njikọ ikuku - Imphal-Mandalay-Yangon-Bangkok bụ nhọrọ ebe enwere ohere ịnweta ibu ndị njem nwere ezi uche. Na nkwekọrịta ụgbọ ala a na-arụ ọrụ.
Ndị ọkachamara, taa India bụ otu n'ime akụ na ụba na-eto eto kachasị elu n'ụwa. N'ime afọ anọ gara aga, gọọmentị anyị emeela ọtụtụ atụmatụ ma webata usoro mgbanwe iji melite ọnọdụ azụmahịa na India. Usoro ndị a emeghewo ohere ọhụụ maka azụmaahịa na itinye ego na India. Eriri mgbanwe mgbanwe akụ na ụba a wetala $ 60 ijeri Ofesi Direct Investment na 2016-17. Ndị ọrụ si Myanmar nwekwara ike iji ohere ndị a maka azụmaahịa na itinye ego na India - ọkachasị North East India. Na World Bank's Ease of Doing Business Report, 2018, enwere nnukwu ịrị elu na ogo India site na 130 ruo 100 na afọ a 77; nke bu ihe si na ngbanwe mgbanwe obula nke ndi India. Ọ dịbeghị mfe ịzụ ahịa na India.
N'aka nke ọzọ, imeghe akụ na ụba na Mianmaa n'ahịa ụwa na-eme ka mmekọrịta azụmahịa sikwuo ike. Enweela nnukwu mmụba na njikọ akụ na ụba na azụmaahịa anyị. Uzo abuo n'etiti India na Myanmar ruru US $ 1605.00 Million n'oge 2017-18, ahia oke ala agafeela USD 90 Million dollars. Ka ọ dị ugbu a, India bụ onye ntinye ego nke iri na nke itinyere ego karịrị USD 10 site na ụlọ ọrụ India iri abụọ na ise, ọkachasị na ngalaba mmanụ na gas. Ahịa n’oge Ọktoba 740.64 ruru $ 25 nde na 2018% mmụba karịa Ọktọba ikpeazụ. Dika nke MOC si gaa na India - $ 153 na mbubata si na India $ 60 n'oge Eprel-October 273.
Myanmar karịsịa Sagaing Region nwere ọnọdụ dị mma, ọtụtụ akụ ndị sitere n'okike, ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọrụ mmadụ - ndị na-eto eto na ọtụtụ ebe ndị njem. A na-etinye ya n'ụzọ dị mma iji zụlite njikọ ahịa na India ọkachasị mpaghara ugwu ọwụwa anyanwụ ya. Manipur na Sagaing Region bụ njikọ jikọrọ mba abụọ.
N'ebe a ugbu a, ọ ga-amasị m imesi ike na ihe anyị chọpụtara bụ naanị akụkụ nke azụmahịa nwere ike ịdị n'etiti mba abụọ ahụ. Agbanyeghị, enwere nnukwu ohere maka azụmaahịa, itinye ego na mmekọrịta akụ na ụba n'etiti akụ na ụba abụọ ahụ. Ọnọdụ azụmahịa na Myanmar na-agbanwe agbanwe, Gọọmenti nwere atumatu ndị ọzọ na-emesapụ aka; Gọọmentị na -emepụta ọnọdụ azụmaahịa na-enwe mmekọrịta enyi na enyi, nke bụ isi ihe dị mma. Iwu itinye ego na Myanmar Investment Law na nso nso a gụnyere mgbanwe dị ukwuu na ọnụ ọgụgụ nke ngalaba ndị a kwalitere, ihe mgbakwunye ụtụ maka itinye ego na mpaghara ndị mepere emepe, na-ekwe nkwa nchebe maka azụmaahịa azụmaahịa, nghọta doro anya na nghọta nke amụma akụ na ụba na gburugburu ebe nchekwa nchekwa.
Iwu ụlọ ọrụ ahụ mere na August 2018, na-enye ụlọ ọrụ ndị mba ọzọ ohere itinye ego ruru 35% na ụlọ ọrụ mpaghara, gaa maka ndebanye aha n'ịntanetị - karịa ụlọ ọrụ 41,000 debanyere aha ọzọ gụnyere ndebanye aha ọhụrụ. Okike nke Ministri ohuru nke ulo oru ntinye ego na mmekorita nke aku na uba ofesi nwere ike idi oke nkpa na imeputa ohere ahia ma nwekwaa mmasi nke Myanmar dika ebe ntinye. E kwewo ka ndị ụlọ akụ si mba ofesi gbazinye ego na azụmaahịa mpaghara na dollar US na ego obodo. N'ihi ya, ihe a niile na-eweta ịnụ ọkụ n'obi ọzọ na gọọmentị Myanmar na-eme atụmatụ itinye ego ogologo oge ma na-enye nnukwu ntụkwasị obi maka nlekọta ahụike, agụmakwụkwọ, njem na okporo ụzọ, mgbanwe na mmezi nke ụzọ ụgbọ oloko, ọkụ eletrik, njem, ile ọbịa na akụrụngwa ma webata usoro iji bulie mmepe nke ulo oru nta na nke nta iji mepụta ọrụ ọzọ ma si otú a na-ebute ọganiihu nke ndị obodo ya. Investlọ ọrụ gọọmentị na-etinye ego na steeti nwere ikike iji kwado itinye ego itinye ego ruru US $ 5 nde na-enweghị atụ aka na MIC. Ntinye ego nke mba ọzọ ga-enwe ike ịkwado SME, rụpụta ngwaahịa na mpaghara, rụọ ọrụ n'okpuru mpaghara mepere emepe yana mepụta ohere ọrụ. GOM amalitela ilekwasị anya na ịkwalite azụmahịa, ebumnuche bụ ibuputa okpukpu atọ site na 2020-21. Ministri Azụmaahịa ebe a ewepụla ikike achọrọ maka ihe dị iche iche nke mbupụ na mbubata iji kwalite azụmahịa ọzọ. Nnukwu mgbanwe ọzọ na akụ na ụba bụ azụmaahịa mba ofesi na ugbu a ka enyere ikike ịmekọrịta na azụmaahịa na azụmaahịa, nke a ga-adọta ego ndị mba ọzọ. Nke a bụ oge kwesịrị ekwesị- ndị ọchụnta ego nke India nwere ezigbo ohere ịtọlite ​​ụlọ ọrụ aka ma kwalite azụmahịa n'etiti mba abụọ ahụ.
M ga-agba ndị isi ụlọ ọrụ mmepụta ihe si mba abụọ dị ebe a ume ka ha wee nwee mkparịta ụka siri ike, nwee mmekọrịta na-amị mkpụrụ maka uru ọ ga-erite na ịchọpụta mpaghara ha nwere ike ịkwado ma ọ bụ nwee itinye ego ma ọ bụ azụmaahịa, mgbe taa na echi. Ekelere m gị nye gị Onye isi ala - Chief Minister Sagaing Region maka ime emume a.
Ejikwa m ohere a na-ekele SDCCI maka nkwado obi ha niile n'ịhazi ihe omume a.
Dusit International weputara ezumike agwaetiti ohuru na Philippines
Ndagwurugwu Silicon gaa El Paso ugbu a na-enweghị nkwụsị na Southwest Airlines